3 Zvikonzero Kutengesa Matimu Anokundikana Pasina Ongororo | Martech Zone
Muvhuro, March 28, 2016 Michael Schultz
Chimiro chechinyakare chemunhu anobudirira mutengesi mumwe munhu anosimuka (pamwe aine fedora nebhegi), akashonga charisma, kunyengetedza, uye kutenda mune zvavari kutengesa. Nepo kushamisika uye runako zvichitamba zvine basa mukutengesa nhasi, analytics yakabuda sechinhu chakakosha kwazvo mubhokisi revatengesi.
Dhata iri panhongonya yazvino maitiro ekutengesa. Kugadzira zvakanyanya kubva kudhata kunoreva kuburitsa njere dzakaringana kuti uone zviri kushanda uye zvisiri. Pasina analytics munzvimbo yekuita izvi, vatengesi nevashambadzi vanonyanya kushanda murima, vachitungamirwa ne intuition. Sekugamuchirwa kwe analytics inoramba ichikura, uye zvishandiso zvadzinowedzera, charisma haina kukwana; kutadza kubatanidza analytics panguva yese yekutengesa inomiririra irema rinokwikwidza kusagadzikana.
Tsvagiridzo kubva kuMcKinsey, yakaburitswa muEbook rakanzi Big Data, Analytics, uye Ramangwana reKushambadzira & Kutengesa, vakawana kuti makambani anonyatsoshandisa Big Data uye analytics ratidza kugadzirwa kwehuwandu uye purofiti iyo iri 5 - 6 muzana yakakwira kupfuura vezera ravo. Zvakare, makambani anoisa data pakati pekushambadzira uye sarudzo dzekutengesa dzinovandudza kushambadzira kwavo dzoka pakudyara (MROI) ne15 - 20 muzana, iyo inowedzera kusvika kumadhora zana nemakumi mashanu - mazana maviri emadhora ekuwedzera kukosha.
Ngationgororei zvikonzero zvikuru zvitatu nei zvikwata zvekutengesa zvichitadza pasina analytics.
1. Muvhimi anotsvaga murima
pasina analytics, kufunga nzira yekushandura inotungamira kuva vatengi yakadzika midzi mukufungidzira uye / kana izwi-remuromo. Kuvimba neura hwako, pane data, zvinoreva kutapudza rakakura nguva uye simba pane vanhu vasina kunaka, misoro, mafomati ekuratidzira - kana zvese zviri pamusoro. Zvakare, vatengesi vekutengesa havasi kungoedza chete kushandura zvinotungamira, asi kuvashandura kuita yenguva refu, yakakosha vatengi.
Ichi hachisi chimwe chinhu chingaitwe nemaoko nekuti pane zvakawanda zvakasiyana uye kuwirirana kusiri nyore. Hapana mafambiro maviri akafanana, uye kufarira kwavo kunogona kuchinja uye kuchinja kubva zuva nezuva. Vatengesi vekare, edza sezvavanogona, havasi vaverengi vepfungwa. Neraki, analytics inogona kujekesa.
Analytics inogona kuburitsa data yekubatana, ichizarura izvo zvinoshanda uye zvisingaite, saka vanhu vanotengesa vanopinda musangano wega wega vakagadzirira. Kudzidza kubva kune yakakosha yekutengesa hurukuro kunoita kuti reps igare ichivandudza. Semuyenzaniso, analytics Inogona kuona kana imwe midhiya inotsvedza inowana mhinduro yakasimba pane dzimwe, dzekuti kufarira kunodonha mushure mekunge imwe nguva yapfuura. Uku kuoneka kunoita kuti reps iwedzere yavo yepedyo mitengo uye kupfupisa yekutengesa macircuit. Analytics inogona zvakare kufumura mafambiro uye kuwedzera chaiyo pombi, nekushandisa data kuti unzwisise kuti ndeapi madhiri angangoita ekuvhara.
2. Yakanyura mumatope
Vashambadziri vanowanzo batikana mune yenguva dzose yekugadzira modhi. Ivo vanoedza kuburitsa yakawanda seyinotungamira sezvinobvira, vovatumira kune zvekutengesa kuti vatevedze, uyezve vozotarisa pane anecdotal mhinduro nezve izvo zvinofungidzirwa kuti zvinoshanda. Nekudaro sezvakataurwa pamusoro, huwandu hwakawanda hweaya anotungamira hautombo shandura. Pasina analytics, iyo "nei" inoramba iri chakavanzika, uye vashambadzi havadzidze kubva mukukanganisa kwavo.
kupana nduma analytics zvinopa vanotengesa nevashambadzi zvakafanana neyakawandisa mhinduro, kuti vagone zero mukati pane izvo chaizvo zvichave zvine basa. Ivo vanopa zvinoonekwa zvisati zvamboitika mukufarira kwevatengi uye izvi zvinobvumidza zvikwata kuti zvive nehungwaru uye nekubudirira nekufamba kwenguva. Izvo timu yekutengesa inofunga ndiyo yakasimba yekutengesa nzvimbo inogona kunge isiri iyo inonyanya kusimbisa nzvimbo yekutengesa, uye kuedza kwavo kunogona kunge kuchimisa semhedzisiro. Kubatanidzwa analytics chishandiso chine simba ku kusagadzikana ivo nekushandura yavo POV, uye nekupa rakaoma data nezve izvo zvemukati uye marongero ane zvakanyanya kukanganisa. Kana vangonzwisisa rwendo rwevatengi, vanogona kukwidziridza maitiro avo nenzira kwayo.
3. Misa kushambadzira
Kunyangwe iwe uri kutengesa tee-shirts kana bhizinesi accounting software, kuita kwako pachako kunosimbisa yako yekutengesa pombi. Vatengi nhasi vakafushirwa nemapango zvekuti havana nguva kana kufarira zvigadzirwa izvo zvisina kukodzera zvakananga uye zvinoenderana nezvinodiwa zvavo zvakasiyana. Nekudaro, kambani yega yega, uye kunyangwe mutengi wese, zvakasiyana, izvo zvinoita kuti vanzwisise zvido zvavo uye kugadzirisa masango zvinoenderana zvisingaite feat pachiyero, zvirinani pasina analytics kubatsira.
Vatengesi nevashambadzi vane hupfumi hwedata pamaoko avo kubva kune zvese zvemukati nekunze izvo zvinogona kubatsira kuburitsa izvo tarisiro dzinoda uye dzinoda kunzwa. Uchishandisa Big Data, analytics, uye kudzidza kwemuchina, makambani anokwanisa kushandura iwo meseji kune mumwe nemumwe anogona mutengi. Nenzira iyi, analytics inosiyanisa huni yako kubva kune vazhinji uye inowedzera mikana yekuti chibvumirano chichavhara.
Munguva yese yekutengesa, analytics inoita zvekutengesa uye zvekushambadzira zvikwata zvine hungwaru, zvinoshanda zvakanyanya uye zvinobudirira, tisingataure zvakanyanya kuenderana, iyo yakabatana nekutengesa kugadzirwa. Icho chinodikanwa munzvimbo yanhasi yemakwikwi, uye seyakafanotaurwa analytics inobvisa, inozonyanya kukosha.
Mabhizinesi ari kuramba achivimba nekufungidzira analytics kugadzira data, kugadzirisa mashandiro avo, uye kugadzirisa kuita sarudzo. Gartner's Hype Cycle yeCRM Kutengesa (2015) mapegi Ekutengesa Predictive Analytics seyakakosha-tekinoroji pamusoro pemakore maviri kusvika mashanu anotevera, uye Forrester Tsvagiridzo vakawana kuti vangangoita zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevashambadziri vari kuita kana kusimudzira fungidziro analytics mhinduro nhasi kana kuronga kuzviita mumwedzi gumi nemiviri inotevera. Kufanotaura analytics inotora zvikwata zvekutengesa kubva kune zvekare kusvika kune zvinoshanda. Pasina kuzviwanira iwo maturusi aya, makambani anozozviwana asara muguruva.
Tags: Analyticsbig datachakajekaDatadata yekubatanaforrester kutsvagisagartnerharvard bhizinesi kuongororahbrkushambadzira nekutengesa analyticskushambadzira kudzoka pane kudyarakushambadzira roiMcKinseydzoka pakudyaraRoyikutengesa analyticsdata yekutengesakutengesa munhukutengesa kudzoka pane kudyarakutengesa roi
Michael Schultz anotungamira Kushambadzira uye Bhizinesi Rekuvandudza ye ClearSlide. Asati ajekesa ClearSlide, akashanda seVP yeStrategic Alliances kuDocuSign, kwaakakwenya nekutungamira kudyidzana uye zvirongwa zvakakosha zvekambani pamusoro pemakore matatu ekukura nekukurumidza. Michael akapedza makore angangoita masere neMicrosoft Corporation mune dzakasiyana SaaS zvigadzirwa manejimendi uye mabasa ekutengesa zvichitevera kuwanikwa kwePareWare musangano wewebhu.